यामागुची प्रिफेक्चर! सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र कुराहरु - Best of Japan
यामागुची प्रान्तमा जापान = शटरस्टकमा मोटोसोमी Inari तीर्थ
Chugoku क्षेत्र! Pre प्रान्तहरूमा गर्नका लागि उत्तम चीजहरू >
यामागुची प्रान्त प्रिफेक्चर हो जुन होन्शुको पश्चिमी भाग हो। यामागुची प्रान्तले दक्षिणतर्फ शान्त सेतो इनल्याण्ड सागरको सामना गर्‍यो, जबकि उत्तर पक्षले ज wild्गली जापानी समुद्रको सामना गर्‍यो। शिन्कानसेन यस प्रान्तको दक्षिणी क्षेत्रमा चल्छ, तर उत्तर क्षेत्रमा यो प्राप्त गर्न असुविधाजनक हुन्छ। किनकि यस प्रान्तमा विभिन्न क्षेत्रहरू छन्, कृपया तपाईंको मनपर्ने पर्यटन स्थल सबै तरिकाले फेला पार्नुहोस्।
फोटोहरू: शान्त सेतो इनल्यान्ड सी
सेतो इनल्यान्ड सागर होन्शुलाई शिकोकोबाट अलग गर्ने शान्त समुद्र हो। विश्व सम्पदा साइट मियाजिमा बाहेक, यहाँ धेरै सुन्दर क्षेत्रहरू छन्। किन तपाईं सेटो ईन्ल्याण्ड समुद्रको वरिपरि आफ्नो यात्रा योजना छैन? होन्शु पक्षमा, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। Shikoku पक्ष कृपया सन्दर्भ ...
अकियोशिदाई र अकियोशिदो
यामागुची प्रिफेक्चर = शटरस्टकमा मोटोनोसुमी तीर्थ
यामागुची प्रान्तमा अवलोकन स्थलहरू वास्तवमै फरक छन्। यदि तपाईं मुख्य गन्तव्यको रूपमा हिरोशिमा प्रान्तको साथ यात्राको योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई इवाकुनी शहरको किन्टाकियो पुलमा जान सिफारिस गर्दछु, जुन हिरोशिमा प्रान्तको नजिक छ। किन्टायक्यो एकदम रोचक पुल हो।
यदि तपाईं प्रकृतिमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं मिसकीको अकियोशिदाईमा जानुहोस्। जापानमा सबैभन्दा ठूलो चुनढुंगा गुफा छ।
यदि तपाइँ जापानी इतिहास र परम्परागत भवनहरूमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाई यामागुची प्रान्तको उत्तरी भागको हागी शहरमा जानुहोस्। उन्नाइसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा, जागीले तोकुगावा शोगुनेटको अन्त्य गरे र आधुनिकीकरणको गति बढाएपछि हागीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले।
यामागुची प्रान्तमा यामागुची उबे एयरपोर्ट छ। यामागुची उबे एयरपोर्टमा, निर्धारित उडानहरू केवल टोकियोको हनेडा एयरपोर्टसँग सञ्चालन भइरहेको छ। जो मानिस टोकियोबाट यामागुची प्रान्तमा जान्छन् उनीहरू शिनकानसेन भन्दा हवाईजहाजको अधिक सम्भावना बढी हुन्छन्। जहाँसम्म, यदि तपाईको यामागुची प्रान्तमा गन्तव्य एयरपोर्टबाट टाढा छ भने, शिन्कानसेन प्रयोग गर्न यो छिटो हुन सक्छ।
यामागुची उबे एयरपोर्टबाट यो बस बाट minutes० मिनेट लिन्छ JR शिन यामागुची स्टेशनमा। यो लगभग १ घण्टा 30० मिनेट बस बाट शिमोनोसेकी स्टेशन पुग्छ। त्यहाँ शिन यामागुची स्टेशनबाट यामागुची प्रान्तका विभिन्न भागहरूमा रेलहरू प्रयोग गर्ने तरिकाहरू पनि छन्।
सान्यो Shinkansen यामागुची क्षेत्र को दक्षिणी भाग मा चलाउँछ। यसैले दक्षिणी क्षेत्रमा तपाई सर्न को लागी अपेक्षाकृत सजिलो छ। यद्यपि उत्तरमा कुनै शिन्कानसेन स्टेशन छैन। कृपया नोट गर्नुहोस् कि नियमित रेलवेको संख्या पनि उत्तरमा सानो छ।
यामागुची प्रान्तमा, सान्यो Shinkansen रेलहरू अर्को stations स्टेशनहरूमा रोकिन्छ।
शिन Iwakuni स्टेशन
शिन यामागुची स्टेशन
शिन शिमोनोसेकी स्टेशन
किन्टाक्यो पुल इवाकुनी शहरको निशिकी नदीमा स्थापित काठको आर्च ब्रिज हो। निशिकी नदीमा (करिब २०० मीटर चौडाई), चार जगहरू निर्माण गरियो। यी आधारशिलामा पाँच काठ आर्च ब्रिजहरू स्थापित छन्। पुल करिब meters मिटर चौडा छ र कुल लम्बाई १ 200 .5. meters मिटर छ। किन्टाक्यो एक धेरै अनौंठो आकारको पुलको रूपमा प्रसिद्ध छ र धेरै पर्यटकहरूको भीडले भरिएको छ।
यो पुल १ 17 औं शताब्दीमा निर्माण गरिएको थियो। त्यस पछि, यो धेरै पटक पुनर्निर्माण गरिएको छ। १ 1950 .० मा, यो आँधीले बगाएको थियो, तर यो तुरुन्त पुनः निर्माण गरियो।
यो अद्वितीय पुल निर्माण हुनुभन्दा पहिले यो पुल धेरै पटक बाढीले उडाएको बताइएको छ। त्यहाँ, लामो आर्क ब्रिजहरू ठोस आधारहरूमा बनाइएको थियो।
तपाईं नदीको ओछ्यानबाट उठ्न सक्नुहुन्छ र यो ब्रिजमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए तपाईं यस पुलको संरचना अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ।
किन्टाइ ब्रिजको वरपर वसन्त Cतुमा चेरी फूल। शरद पात पनि सुन्दर छन्। यस पुलले चार सीजनहरूमा परिवर्तनहरू प्रतिबिम्बित गर्दछ, सुन्दर दृश्यहरू सिर्जना गर्दछ।
>> किन्टायक्यो विवरणका लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
चूना ढुstone्गा र सिन्खोलहरूले जापानको सबैभन्दा ठूलो कार्ट ल्यान्डस्केप, अकियोशिदाई अर्ध-राष्ट्रिय निकुञ्ज, यामागुची, जापान = शटरस्टक परिभाषित गर्दछ।
जापानको सबैभन्दा ठूलो चूना पत्थर गुफा, अकियोशिडोमा विशाल नागाबुची कोठा यसको उच्च छत र नदी फ्लोर = शटरस्टकको लागि परिचित छ
यामागुची प्रान्तको मध्य भागमा त्यहाँ दुई अचम्मका ठाउँहरू छन् जुन माथिका फोटोहरूमा देखिएका छन्।
पहिलो चित्रमा देखिए अनुसार जापानमा कार्ट फार्मेशन्सको अत्यधिक सांद्रता भएको पठार अकियोशिदाई जमीनमा फैलिरहेका छन्।
र दोस्रो चित्रमा देख्न सकिन्छ, जापानको सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा लामो चूना पत्थरको गुफा अक्योशिडो तहखानेमा फैलियो। तपाईं यसलाई यो गुफामा राख्न सक्नुहुन्छ।
यी ठाउँहरूमा अतुलनीय शक्ति छ। यदि तपाइँ अन्वेषण गर्न रुचि राख्नुहुन्छ भने, म सिफारिश गर्दछु कि तपाइँ अकियोशीदाई र अकियोशिदोमा जानुहोस्।
>> Akiyoshidai को विवरणको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
हागी, जापानको पूर्व महल शहर सडकहरू = शटरस्टक
हागी शहर यामागुची प्रान्तको जापान सागर छेउमा अवस्थित पुरानो शहर हो। यो शहर कुनै समय तोकुगावा शोगुनेटको युगमा मौरी कुला (चोशु कुल) को केन्द्र थियो। टोकुगावा शोगुनेट समाप्त गर्ने र आधुनिकीकरणको गति बढाउने क्रममा मौरी वंशले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। यदि तपाई हागी जानुहुन्छ भने तपाई ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरु को जन्मस्थल देख्न सक्नुहुन्छ जसले जापान र सम्बन्धित संग्रहालयहरु आधुनिकीकरणमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु छोड्नुभयो।
टोकुगावा शोगुनेट युगको अन्त्यमा, हागी एक केन्द्र थियो जसले जापानको राजनीतिलाई स्थानान्तरण गर्‍यो। यद्यपि, हागी सहर कतै विकसित भएन। किनकि यो शहर चारै तिर पहाडहरूले घेरिएको छ, शहर विस्तार गर्न त्यहाँ एक सीमा थियो।
त्यसकारण, हागीमा पुराना घर र सडकहरू छोडियो। त्यसो भए, तपाई समुराई हिँड्न सक्ने हिंड्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई ईतिहासमा रुचि राख्नु हुन्छ भने, मलाई लाग्छ कि हागी एक धेरै आकर्षक पर्यटन गन्तव्य हो।
>> हागी विवरणका लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
फोटोहरू: यामागुची प्रान्तमा मोटोनोसुमी तीर्थ
होन्शु टापुको पश्चिमी छेउमा अवस्थित नागाटो शहर खडा चट्टानहरूको साथ एक सुन्दर क्षेत्र हो। मोटोनोसुमी श्राइन १ 1955 .XNUMX मा यस चट्टानमा निर्माण गरिएको थियो। जापानमा प्रख्यात नभए पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाको सीएनएन टिभीले यसलाई जापानको सबैभन्दा सुन्दर ठाउँका रूपमा परिचित गर्‍यो। दृश्यहरु ...
होन्शु टापुको पश्चिमी छेउमा अवस्थित नागाटो शहर खडा चट्टानहरूको साथ एक सुन्दर क्षेत्र हो। मोटोनोसुमी श्राइन १ 1955 .XNUMX मा यस चट्टानमा निर्माण गरिएको थियो। जापानमा प्रख्यात नभए पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाको सीएनएन टिभीले यसलाई जापानको सबैभन्दा सुन्दर ठाउँका रूपमा परिचित गर्‍यो। चट्टानमा दृश्यहरू अचम्मको छ!
"Chugoku क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ" फिर्ता
Shimane प्रिफेक्चर:7उत्तम आकर्षण र गर्न चीजहरू
कागवा प्रान्त! सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र गर्न चीजहरू